Simple umshini ohlanza amanzi ekhaya
Minyaka yonke, isimo emvelweni e imizana is kakhulu phansi. Ngakho-ke, kokunakekela impilo yakho iya kwenye yezindawo eziyinhloko. Ungathatha amavithamini bese uya a club imfanelo. Kodwa uma lesi siphuzo amanzi angcolile, yonke imizamo kukhona alunamsebenzi. Kunezindlela eziningana ukuze kuthuthukiswe izinga lokuphila futhi ukusiza ekuvuseleleni izindawo emzimbeni wakho. Ukuze wenze lokhu, kumele wazi indlela yokuqhuba ukuhlanzwa amanzi ekhaya.
Iningi yezindlela ezisetshenziswa izinkulungwane zeminyaka. Kuwo wonke umlando ukuthuthukiswa indoda umphakathi bekulokhu kumatasa ukuqinisekisa emizini yabo amanzi okuphuza ahlanzekile. Ake sibheke izindlela ezimbalwa etholakalayo engasetshenziswa kunoma iyiphi indawo evumelana nawe.
Ukuhlanzwa amanzi ekhaya by ubudala
Zeminyaka eziningana, eyaziwa ekhethekile magciwane izakhiwo wethusi. Ukudlulisa amanzi phezu ezifana namanzi, izakhamuzi Egypt neRoma lasendulo kwadingeka okuphuza ahlanzekile, lapho kungekho amagciwane. Nokho, lokhu izidakamizwa has a izinga ezimbi. compounds zako ziyizindlela enobuthi kakhulu. Ngakho-ke, ukugcina amanzi esitsheni sethusi, okuyisimo esisongela ukuphila. Ukuze zokukhipha igciwane ke ngokwanele amahora amane kuphela. Emva kwalesi sikhathi, amanzi ahlanzekile kufanele elampontshelwa lesinye.
ERussia neNdiya, ukuhlanzwa amanzi ekhaya kwenziwa amapuleti isiliva noma izinto. Le ndlela yokubala isasetshenziswa ngu Lobu-Orthodox LaseRussia ukulungiselela iziwasho. nto Isiliva kwehla ku isitsha, ingashiswa ketshezi isheshe futhi ingcono kakhulu kunanoma chlorine igesi, carbolic acid chlorine. Kodwa inzuzo enkulu wukuthi umphumela magciwane ketshezi lilondolozwe ezinyangeni ezimbalwa.
Inzalo olukhulu ososayensi ngokuthi indlela magciwane esetshenziswa Abelapha kanye nezinyanga lasendulo. Ukuhlanzwa kwenziwa ngokusebenzisa amanzi willow namagxolo, amaqabunga cherry zasendle, iingojwana zokhuni Rowan. Le ndlela ungakwazi ukuhlanza amanzi ngisho ixhaphozi, ukukhulula ke kusukela ukunambitheka kabi iphunga. Uzodinga ke kunoma yisiphi isikhundla futhi ubambe amagatsha Rowan esitsheni amahora mayelana 2-3.
Kodwa indlela endala ukuthi kuyaziwa kusukela ngezikhathi zeBhayibheli kuhilela ukusetshenziswa intokazi ezomile iwayini emhlophe. Kungezwe amanzi ngezabelo ka 1/3, isusa utshani obukhulu isiphuzo akuyona okubi kakhulu ukwedlula ipuleti esiliva.
Amanzi nokuhlanzwa ekhaya izindlela zanamuhla
Enye yezindlela elula magciwane ketshezi kuyinto abilayo. Kodwa ngisho inqubo elula efana kufanele sigcwaliswe ngendlela efanele. Ukubulala-50% ama-bacterium kudingeka ubilise amanzi imizuzu 5 kuya ku-10. Uma inqubo ukwenza imizuzu 30 ke liyobhujiswa 99% kwamagciwane. Futhi kuphela igciwane-anthrax uzofa ngemva kwehora elilodwa umsebenzi wokupheka inhlama okuqhubekayo. Nakuba le ndlela ubhekwa ezivamile, libuye libe kusimo enkulu. liquid okunjalo iqukethe lokuhlushwa maximal of izinsimbi ezisindayo, nosawoti nemikhiqizo kamanyolo.
Ukuhlanzwa yamanzi yasendlini ukuhwamuka futhi eyaziwa kabanzi indlela yokuthola ketshezi distilled. Nakuba ingenayo amagciwane nhlobo, ulisebenzise isikhathi eside kungaholela imiphumela engemihle. amanzi distilled unekhono iphume nomzimba womuntu namaminerali ewusizo nosawoti.
Eyodwa yezindlela elula futhi ephumelela kunazo zonke umshini ohlanza amanzi angabhekwa okokuqandisa. Le nqubo kulula lokufeza ekhaya. Futhi uma une ehlukile efrijini gumbi, unganikela nomndeni wakho nge nsuku zonke ngamanzi ahlanzekile. Enough ukugcwalisa imbiza nge uketshezi. Khona-ke uyifake efrijini. Phakathi zeqhwa molecule yamanzi crystal ekuthuthukiseni azixoshe konke ukungcola.
Kuyadingeka ukuba ulinde kuze kube yilapho 2/3 yamavolumu ketshezi iphenduke ice. Sithola ebhange futhi uthele amanzi nokususa block ice kwesinye isitsha futhi incibilikiswa. Ngale ndlela sithola amanzi oluhlanzekile khulula amanyela.
Indlela yokwenza uketshezi elivuthayo elivela izindlela ngokurhaba: Ngamangala nihlobise
Samandla ngenxa yokudweba imoto ngezandla zakhe. Umgomo we operation ye compressor. compressor Circuit
Dyubazh isibindi ekhaya - kudingekile noma cha?
Nokunamathisela ngomthofu plastic: Amathuluzi, Technology
Ishalofu iwayini ngezandla zakhe: imibono abathandwayo
Zokushisela zethusi wire: sokubuyekezwa izindlela zokusebenza nemishini. Nokunamathisela ngomthofu noma Welding izintambo zethusi - okuyinto engcono?
Okuzenzela noodle iresiphi. Ayntopf yemifino ne noodle kanye amakhowe.
Artificial semvu: izincomo ukukhethwa nokunakekela
Awazi yini ukunikeza umshado wokuqala? Jikela umcabango!
Uyini ekunakekeleni strawberry ngemva kokuvuna
I-Goby stroller Geoby D888: ukubuyekezwa
Isisindo uyaqhubeka, yini okufanele uyenze? Kungani isisindo sisesenjalo isisindo ukulahleka
Ukwakhiwa kanye nokulungiswa
Isikrini ukuphrinta ku izikibha
Isikrini ukuze okugeza - usizo, lula, ubuhle
Ngingakujabulela yini "Polisorb" ibele?
Leuzea: impendulo ku ukusetshenziswa isithako nomuthi. ayelapha levzei